मान्छेको छाउरो/ जगदीश घिमिरे
निस्तब्ध रात कुनै स्वास्नीमान्छेको निर्जीव हृदय हो, जसलाई चिरेर एउटा तीतो स्वर, कुकुरको सानू छाउरोको प्रलाप, बाँसको लिङ्गोजस्तै ठडिन्छ आकाश छुने गरी - क्याइँ क्वँ वाँ वाँ वाँ ईं ईं ईं क्वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ ईं ईं ईं ईं ईं ईं...! यो चीत्कार दोहेरिन्छ, तेहरिन्छ, चौहरिन्छ, प्रत्येक पटक अझ सघन, अँ तिखो, अझ अग्लो भएर कराउँछ यो आवाज।
Read more about मान्छेको छाउरो/ जगदीश घिमिरे
देवता म होइन !/ मीरा प्रधान रेम
जाडो महिनाको मध्याहृनमा कौसीमा घाम तापिबसे छु । केही वर्ष यता प्रत्येक शरद् मनमा कहीँकता एउटा प्रश्नले गोमनले जस्तो फणा उठाएको हुन्छ, यही मेरो अन्तिम शरद् त होइन ? जीवन-यात्राको अन्तिम बिसौनी यो वृद्धावस्थामा अनेकौं रोगहरू पाली, असङ्ख्य गुनासाहरू बोकी अझै कति दिन अल्भिmने हो कुन्नि ? मृत्यु उछिनेर जीवन अँगालेर कुदिरहेका मेरा पाइलाहरू अब निक्कै सुस्काइसकेका छन् । कुनै बेला पनि यो प्राण हुरुक्क जान सकिने छ, आफूभित्र जीवन-यात्राको सहस्र अनुभूतिहरू सँगालेर, मात्र अनुभव र अनुभूतिहरू ।
Mira Pradhan Rem
Read more about देवता म होइन !/ मीरा प्रधान रेम
Read more about पोट्रेट/ मञ्जुल
Read more about स्वार्थी चाहाना/ आचार्य प्रभा
न्याय/ जगदीश घिमिरे
वनस्पतिसँग सोधेँ, "के चाहन्छौ ?"
वनस्पतिले भने, "न्याय ।"
"त्यो भनेको के ?"
वनस्पतिले भने, "अरूको अधिकार हनन नगरीकन धरतीमा हामीले पाउने न्यायोचित भाग ।"
मैले भनेँ, "अलि प्रस्ट भन न !"
Read more about न्याय/ जगदीश घिमिरे
Read more about डढेलो/ विवश पोखरेल
Read more about नजन्माएकी छोरी/ गीता केशरी
एक्ली स्यारोन/ होमशंकर बास्तोला
हिजोअस्तिझैँ कम्प्युटरमा च्याट गर्दा अचानक एक परिचित मान्छेले च्याट गरेजस्तो लाग्यो । तर के परिचय हुनु, ऊ समुन्द्रपारिकी थिई, म हिमालवारिको थिएँ । उसले यति नम्र र शालीन शब्दहरु प्रयोग गरेर म्यासेज गर्थी । म भने भर्खरै–भर्खरै नेटको सुविधा उपयोग गर्न थालेको थिएँ । शब्दहरु लेख्दा शब्दको अघिल्लो अक्षर लेख्ने, वाक्य बुझ्नै नसक्ने र अपूरा हुन्थे । यस विषयका भुक्तभोगीहरुका लागि यस्ता शब्द र वाक्यहरु उनीहरु राम्ररी बुभ्mदारहेछन् । मैले पनि बिस्तारैबिस्तारै बुभ्mन थालेको थिएँ । हाम्रा दिनहरु प्रायः कम्प्युटरमा च्याट गरेर बित्थे । ऊ प्रत्येक दिन मलाई माया उत्प्रेरित हुने शब्दहरु टाइप गरेर पठाउँथी । म
Read more about एक्ली स्यारोन/ होमशंकर बास्तोला
Read more about रुपबजारकी नोरा / सरोज शार्दूल